NY MPISORONA AMIN’IZAO ANIO IZAO – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 mai 3, 2013 juin 28, 2013 Laisser un commentaire sur NY MPISORONA AMIN’IZAO ANIO IZAO
« Ka dia atsangana koa hianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina, hanatitra fanati-panahy sitrak’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy Kristy. » IPet 2: 5
Ny mpisorona tany aloha, tamin’ny Testamenta taloha dia ireto telo ireto no asany:
– Manao ny asa fanompoana ho an’ny Tompo ao amin’ny Tempoly
– Mampianatra ny lalàna hoan’ny vahoaka
– Solontenan’ny vahoaka manontany an’Andriamanitra
Amin’ny Testamenta Vaovao, Kristy no mpisoronabe tokana sady
tanteraka (Heb 7: 24-28). Ny mino rehetra kosa (ny vita batisa) dia fanjakam-pisorona, satria lasa mpanjaka sy mpisorona miaraka amin’Ilay nampiditra azy ireo hatrany amin’ny fitoerana masina indrindra, namaky teo amin’ny efitra lamba (Heb10:20).
Triatra nisasaka ny efitra lamba teo amin’ny tempoly. Rehefa tena
hiala ny ain’i Jesosy dia nihamaizina ora telo ny masoandro ary
triatra izany lamba izany (Lio 23: 45). Ny ambaran’izany dia ianao sy izaho izay natao batisa tamin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia ao amin’ny fanjakam-pisorona. Ny Fanekena Vaovao dia izay voambara ao amin’ny Testamenta Vaovao. Ny ràn’ny Fanekena Vaovao dia ny rà nalatsaka indray mandeha, sorona noho ny ota, tsy miverimberina intsony. Tsy rà-na zavatra hafa intsony, fa ny ràn’i Kristy, dia tsy ràn’ny zanak’ondry tsotra fa ràn’ny Zanak’ondrin’-Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao.Jesosy Kristy no Mpisoronabe nanao fanatitra; dia ny tenany ihany. Ny vita batisa dia atsangan’Andriamanitra ho trano-fanahy, ho fisoronana masina. Ny olona tsotra dia nofo sy fanahy fa saingy misy ny karazana fanahy: dia ny fanahin’Andriamanitra sy ny fanahin’i Satana. »Fa izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra »(Romana 8:14). Isika izay vita batisa no lasa trano fanahy fa tsy trano-nofo (trano-fanahin’i Satana). Ahoana ary ireny vita batisa lasa mpamono olona sy mpangalatra, ireny? Rehefa tranon’ny fanahin’Andriamanitra ny olona iray dia voaroaka ny fanahy maloto ao anatiny.Raha fenoin’ny fanahy tsara ny trano; nefa avy eo foana tsy nokarakaraina dia mitondra fanahy fito hafa ny fanahy ratsy niala, dia lasa ratsy noho ny teo aloha ny trano. Mila fikarakaràna ny trano fanahy. Aoka ny tenanareo atolotrareo ho fanatitra velona, masina, sitrak’Andriamanitra, dia fanompoam-panahy mety hataonareo izany.(Romana 12:1) Marihina tsara eto fa tsy fanatitra alatsa-drà vonoina intsony no aterina fa ny tenantsika velona (fanatitra velona fa tsy maty). Velona azon’ny
Tompo ampiasaina. Velona azon’Andriamanitra hamasinina amin’ny alalan’i Kristy.
Fa ny mpisoronabe rehetra dia alaina amin’ny olona ka tendrena ho solon’ny olona hanao ny raharahan’Andriamanitra, hanatitra fanomezana sy fanatitra hanafaka ota; dia olona mahay mitondra mora ny tsy mahalala sy ny mania, satria ny tenany dia hodidinin’ny fahalemena ihany. Ny sorona atao dia ny vavaka, izay mbola ataon’ny Tompo hatramin’izao, mandohalika ho antsika. Tokony hivavaka ho an’ny tenantsika isika, ary avy eo hivavaka ho an’ny hafa. Teo ary ny nandehanantsika araka ny saimpatan-tsika , nandehanantsika araka ny kibontsika, araka ny filàna ratsy, ka nanaovantsika tsinontsinona ny Ràn’i Jesosy Kristy izay nalatsany ho ahy sy hianao. Andeha hiverina aminy isika. Tsy manankery isika raha mandeha irery fa andeha hiverina Aminy ka hanatitra fanompoam-panahy ho Azy dia ny tenantsika, izay ho fanatitra Velona, Masina, Sitrak’Andriamanitra.
Ny Tompo mampahery anao!.
Publié parfilazantsaramada mai 3, 2013 juin 28, 2013 Publié dansUncategorized